၂၁ ရာစု နှစ် ဦး စလုံးသောရာစုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအဖြစ်ဖြစ်လာကြပါပြီ နှစ်ခုအမှန်တကယ်ခြိမ်းခြောက်မှုများ ကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု, el mismo ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် တိုးမြှင့် အလယ်အလတ်အပူချိန် သဘာ ၀ အကြောင်းတရားများကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်သမုဒ္ဒရာနှင့်လေထု၏အဓိကအကျိုးဆက်အဖြစ် လူ့အရေး.
အ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများ လယ်ပြင်၌, သူတို့သည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာနှင့်ဤပူနွေးသောအပြောင်းအလဲများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေဆယ်စုနှစ်များစွာနေခဲ့ကြ အားလုံးကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကျော်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရပ်တန့်ဖို့အချိန်ရှိသေးလျှင် အကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုများ ၎င်းသည်ကမ္ဘာမြေ၏သဘာ ၀ သက်တမ်းကိုတိုစေနိုင်သည်။ ထိုအခါငါပိုမိုအသေးစိတ်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သို့ဖြစ်ကြ၏ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကြောင်းရင်းများ အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးဆက်များ။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များစွာ၏အဆိုအရကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းအချို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် သဘာဝအကြောင်းတရားများသို့မဟုတ်အတုအကြောင်းတရားများ လူသား၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် သဘာဝအကြောင်းတရားများနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာများအတွက်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းတရားများသည်ဖြစ်ပေါ်လာရန်မလုံလောက်ပါ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ယနေ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးသည်ဒုက္ခရောက်နေပြီး၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏သဘာဝအကြောင်းတရားများ အရေးအပါဆုံးနှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ကျန်းမာရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုရှိခြင်းသည်ကြီးမားသောတိုးပွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ရေတိုအပူသံသရာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေသည် ပို၍ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်၎င်း၏နျူကလီးယားပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း၌လည်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အိုဇုန်းလွှာနှင့်ကမ္ဘာမြေ၏သံလိုက်စက်ကွင်းများကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသောနေရောင်ခြည်များပြန့်ကျဲနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ အကြောင်းမှာဤဓါတ်ရောင်ခြည်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အပူပုံစံဖြင့်သိုလှောင်ထားသည့်လေထုထဲတွင်ရှိနေပြီးကမ္ဘာ၏ပျမ်းမျှအပူချိန်ကိုမြင့်တက်စေသည်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖြစ်ပေါ်စေသောသဘာဝအကြောင်းအရင်းနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် ရေနွေးငွေ့ ပျှမ်းမျှအပူချိန်ကိုအချိန်နှင့်အမျှတိုးပွားစေပြီးပူနွေးလာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရေငွေ့သည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီးအပူကိုသဘာဝထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်သာယာသောအပူချိန်တွင်သက်ရှိများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်နိုင်သည့်ရေငွေ့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြproblemနာမှာလူသားများသည်ရေသံသရာ၏ဤအပိုင်းကိုပြုပြင်ပြီးရေငွေ့များထုတ်ပေးသောအခါဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အတုနှင့်သဘာဝနှစ်မျိုးလုံးကိုကြည့်သည့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ လေထုရေငွေ့ပမာဏများလေလေအပူကိုထိန်းထားလေလေဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏တတိယမြောက်သဘာဝအကြောင်းအရင်းသည်ဒါခေါ်ကြောင့်ဖြစ်သည် ရာသီဥတုသံသရာ များသောအားဖြင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုပုံမှန်ဖြတ်ကျော်သည်။ ဒီသံသရာဖြစ်ရပါမည် နေရဲ့ရောင်ခြည်မှ ကြယ်ဘုရင်၏။ ဤနည်းအားဖြင့်နေသည် စွမ်းအင်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ် သောမောင်း ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုနေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်ကိုယ်တိုင်ရှိခြင်းသည်ယုတ္တိရှိသည် တစ် ဦး မြင်သာထင်သာအခန်းကဏ္။ အပူချိန်တွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးသက်ရောက်နေသည့်အပြောင်းအလဲများဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတွင်သဘာဝအကြောင်းတရားများသည်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သော်လည်း၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အတုအကြောင်းတရားများ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အများဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့သောသူများ။ လူလုပ်ပြုလုပ်သောအကြောင်းရင်းများမှာတိုးများလာခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ကိုခေါ် လူ၏အရေးယူမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့။ ဤသည်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်သည်ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ၎င်းသည်ယနေ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်လွှတ်မှု၏ဤအမျိုးအစားတစ်ဖြစ်လာသည် အစစ်အမှန်အန္တရာယ်နှင့်ခြိမ်းခြောက်မှု ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အသက်အတွက်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူအများစုကရှာဖွေကြသည် ချက်ချင်းဖြေရှင်းချက် ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုတက်ရိုက်နှက်ရန်။
ဤကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုသည်လောင်ကျွမ်းခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ။ AND ဒီလောင်ကျွမ်းမှုအများစုဟာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ဓာတ်ငွေ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလမ်းများပေါ်တွင်နေ့တိုင်းကားများအသုံးပြုသည်။ နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ များပြားသောမီးလောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအထိရောက်ရှိသည် အပူချိန်အတော်လေးမြင့်မားသည် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ကြီးမားသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လေထုဒိုင်းနမစ်ကိုလေထဲရှိဓါတ်ငွေ့များစုစည်းမှုကြောင့်အစဉ်မပြတ်ရွေ့လျားနေသောအရာတစ်ခုအဖြစ်နားလည်ရမည်။ ထို့ထက်ကား၊ CO2 ဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာသည်အမြဲတမ်းတူညီခြင်းမရှိပါ၊ အကြောင်းမှာ photosynthesis ကိုထုတ်ယူပြီး၎င်းဓာတ်ငွေ့ကိုရှင်သန်ရန်ဤဓာတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုသောသက်ရှိသတ္တဝါများစွာရှိပါသည်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏လူလုပ်ပြုလုပ်သောအခြားအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိသစ်တောများအနက်မှလေထုထဲတွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များတက်လာစေသည်။ သစ်ပင်များသည် CO2 ကိုအောက်စီဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည် photosynthesis ဖြစ်စဉ်ကို နှင့်ပိုင်ဆိုင်သည် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း CO2 ကိုအောက်စီဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ရရှိနိုင်သည့်အပင်အရေအတွက်လျော့နည်းစေသည်။ ဒီရလဒ်ကသာ။ ကြီးမြတ်သည် CO2 အာရုံစူးစိုက်မှု ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်အပူချိန်ပိုမိုကြီးထွားဖို့ ဦး ဆောင်သောလေထုထဲမှာ။
သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့်မျိုးစိတ်များစွာ၏သဘာဝကျက်စားရာနေရာများပျက်စီးခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများလျော့နည်းစေသည်။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှုန်းသည်မရပ်တန့်ဘဲ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမေဇုန်သစ်တောများ၏ထက်ဝက်ကျော်ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
El ဓာတ်မြေသြဇာအလွန်အကျွံ စိုက်ပျိုးရေးတွင်အလွန်များပြားလာခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ပျမ်းမျှအပူချိန် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏။ ဒီဓာတ်မြေသြဇာမှာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ပါဝင်တယ် နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထက်ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသည်။ လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ၊ အစားအစာပိုမိုလိုအပ် ထို့ကြောင့်စိုက်ပျိုးသောလယ်ယာမြေများတိုးပွားလာသောကြောင့် ပို၍ ကြီးသည် ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုမှု သူတို့ကို၌။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးသည်အမြန်ရိတ်သိမ်းမှုလိုအပ်ပြီးဓာတ်မြေသြဇာများ၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဖန်းဂတ်စ်များနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ဆက်စပ်နေသောအရာအားလုံးကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောအသုံးပြုမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသည်။ ရေရှည်စဉ်းစားရန်နှင့်ဓာတ်မြေသြဇာများများစားစားမလိုအပ်ဘဲသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်းရှိဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များကိုစတင်သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နောက်ဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် မီသိန်းဓာတ်ငွေ့။ ဤကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့သည်များစွာသောဖန်လုံအိမ်အာနိသင်၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည် CO2 ကိုယ်တိုင်က။ မီသိန်းကိုလည်းပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းမှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်သည် ဖို့မြေစွန့်ပစ်ပစ္စည်း နှင့်ချေး၏ဘာသာရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံး၌။ အော်ဂဲနစ်ပြိုကွဲခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်မရှိခြင်းသည်မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဓာတ်ငွေ့သည်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာပြီးအပူသိုလှောင်နိုင်မှုသည်ကြီးမားသည်။
သငျသညျမြင်ကြပြီမှန်ကန်ကြောင်းအဖြစ်သူတို့ဖြစ်ကြသည် အကြောင်းရင်းများစွာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုတိုးပွားစေပြီးကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုအန္တရာယ်ပြုစေသည် နှစ်လတ်။ သဘာဝကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူနွေးလာမှု၏အကြောင်းရင်းများပေမယ့် သူတို့ရဲ့သက်ရောက်မှုရှိသည် ထိုသို့သောပူနွေးလာမှုသည်လူလုပ်ပြုလုပ်သောအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည် ဖြေရှင်းရန် အချိန်အတိုဆုံးပမာဏ။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ၂ ဝ ၁၅ ခုနှစ်သည်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည် အပူဆုံး တစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အားလုံးသမိုင်း၏။ မကြာခဏတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူဤအမှန်တကယ်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအချက်သည် ရာသီဥတုဆိုးဝါးခြင်း ဟာရီကိန်း၊ လေဆင်နှာမောင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်ကလုန်းများသည်သတိအများစုကိုအာရုံမှဖယ်ရှားပစ်သင့်သည် ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေရန်။
ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, အစိုးရများ၏ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများ လျင်မြန်စွာအရေးယူနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုအဆုံးသတ်နှင့်ရမယ် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးသည်နေ့တိုင်းခံစားနေရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကြောင်းရင်းများ
Rolando Escudero Vidal ဟုသူကပြောသည်
စာရေးသူ Rolando Escudero Vidal
ငါ Pneumoponics အကြောင်းပြောဆိုရန်အချိန်ရောက်လာပြီထင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ငါ့နေ့ရက်များကိုရေတွက်နေကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုလူသားများခံစားနေရသောကြောင့်၎င်းသည်လေထဲတွင်ဖုန်မှုန့်များဖြစ်သည့်တိုင်၎င်းကိုမပြောခြင်းအတွက်နောင်တရလိမ့်မည်ဟုမလိုလားပါ။ သေချာတာပေါ့, အချို့ငါမိုက်မဲသောပြောပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းတွင်မိမိထင်မြင်ချက်ကိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ငါမိုက်မဲတယ်လို့ပြောရင်ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ ဒီတော့လျှင်ရုတ်တရက်အားလုံး, ငါမိုက်မဲသောအရာတို့ကိုပြောစေသည်သောအရာတစ်ခုခုကိုငါသိလာတယ်။ ထိုအခါငါပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြောင်း, ဒါကြောင့်တကယ့်အခြေခံတွေရှိတယ်။
အဆုတ်ရောင်ဆိုတာဘာလဲ Pneumoponics သည်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြစ်ကို ဖြတ်၍ လေနှင့်အတူအပင်များကိုအစာကျွေးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုတီထွင်မှုဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် INDECOPI တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အမြစ်မှသာအစာကျွေးကြောင်းနှင့်အရွက်သည်အပင်အတွင်းရှိထုတ်လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်ရန်သာဆောင်ရွက်ကြောင်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့အတွင်း၌နေရာယူသောဓာတုဖြစ်စဉ်များ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်။ ထိုဓာတ်ငွေ့များထဲမှတစ်ခုနှင့်အပေါများဆုံးမှာအောက်စီဂျင်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအချိုးအစားတွင်အသုံးပြုသောဤနည်းလမ်းသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရုံသာမကဘဲလူသားတို့၏လေထုကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အစာအဖြစ်ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားများစွာကိုအသုံးပြုသည်။ လေထုထဲရှိဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီတီထွင်မှုဆိုတာဘာလဲ? ဤတီထွင်မှုသည် Rolando Escudero Vidal မှရေးသားထားသောလေထုတန်းတူညီမျှမှုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်စီမံကိန်းခေါင်းစဉ်စာအုပ်အားဖြင့်ဖွင့်ပြထားသည့် Radicular သီအိုရီအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤသီအိုရီသည်သဘာဝတွင်တွေ့ရှိနိုင်သောအချက်အလက်များနှင့်အရာများစွာအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီသီအိုရီကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအမြစ်ကသာကျွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အရွက်များသည်အတွင်း၌ဖြစ်ပွားသောဓာတုဖြစ်စဉ်များမှထုတ်လုပ်သောဓာတ်ငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်ရန်သာဆောင်ရွက်သည်။
သို့သော်ဤစီမံကိန်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလူသားတို့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောလေထုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်မတ်လပထမရက်များ၌၎င်းသည်ပီရူးပြည်နယ်အားပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုယ်စား La Neumoponia ၏အနှစ်ချုပ်ကိုအစိုးရအိမ်တော်သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးများ၏ ၀ န်ကြီးဌာန၏အမည် - ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနစသည်။ La Primera ၏ဖော်ပြချက်အရကွန်ဂရက်သမ္မတ၏ကိုယ်စား Mr Ana MaríaSolórzanoသည်သမ္မတ၏ကွန်ဂရက်တွင်လည်းဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထင်မြင်ချက်အချို့ပေးခဲ့သည်။ တစ် ဦး ကအသံအတိုးအကျယ်ကိုလည်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
Rolando Escudero Vidal အားစာပြန်ပါ
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးဆက်များကားအဘယ်နည်း။ အတော်များများနှင့်အလွန်လေးနက်။ လေထုထဲတွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်များစွာစုဆောင်းနေကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဓာတ်ငွေ့မှာကာဗွန်ရှိတယ်။ ကာဗွန်သည်အပူကိုစုဆောင်းပြီး၎င်းကို၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပို့လွှတ်သည်။ လေထုတွင်မူကမ္ဘာမြေဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကိုအပူပေးလိုက်သောအခါသူကချဲ့ထွင်ပြီး၎င်းကိုတိုးချဲ့သောအခါအားနည်းသည်။ ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာကအပူတွေတက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်တိုးချဲ့နေသည်။ တိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်အားနည်းနေတယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အကျိုးဆက်မှာနေရာများစွာတွင်တွေ့ရသောအက်ကြောင်းများဖြစ်သည်။ အဲဒီနေရာတွေထဲကတစ်ခုကကျွန်မချစ်ရတဲ့Callejón de Conchucos ပါ။ Piscobamba, Socosbamba စသဖြင့်သက်ရောက်သောဖြစ်ရပ်ဆန်း ပြီးတော့တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းကကံမကောင်းတာ၊ အခြားမရှိပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီနေရာတွေမှာတစ်နှစ်သာနေရမယ်။
Francisco Garcia ဟုသူကပြောသည်
ငါသဘောတူသည်၊ ယခုသည်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များအရအလွန်အောင်မြင်သော Hydroponics နှင့် aeroponics များအတွက်နောက်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာလူသားများသည်အစားထိုးအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည့်ပျက်စီးမှုကိုသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်သည်။ အပင်များသည်ဇီဝထုအတွင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏အစဖြစ်သည်ကိုမမေ့ဘဲ။
francisco Garcia သို့စာပြန်ပါ
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ပြproblemsနာများစွာ၊ လူအများသေဆုံးနိုင်သည်၊ တိုင်များအရည်ပျော်လျက်ရေကြီးခြင်းများစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်လူတို့ဘာဖြစ်မည်ကိုမစဉ်းစားကြပါ။
Enrique jr ဟုသူကပြောသည်
လူတွေဟာသူတို့ဟာကံမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်မယ့်အရာတွေကိုအများကြီးအရေးမထားဘူးလို့မထင်ပါဘူး၊ ဘုရားသခင်တားမြစ်ထားပါ၊ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုအရေးမထားဖို့ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုလူတွေသိဖို့မလွယ်ပါဘူး။
enrique jr သို့ပြန်သွားရန်
အလွန်ပူသောမျက်နှာပြင်များ (ဥပမာ - လေယာဉ်အင်ဂျင်များ) နှင့်ထိတွေ့နေသောလေထုထဲရှိနိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်တို့ကိုနိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်လှိုင်းအလျား၏ ၀.၃၁ ထက်နည်းသောဓါတ်ရောင်ခြည်၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ မိုက်ခရိုမီတာ, အိုဇုန်းလွှာ၏ကုန်ခမ်းဖို့ ဦး ဆောင်နေပါတယ်။
သေချာသည်မှာ၎င်းသည်ပြsoonနာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး (ပိုမို) အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများမရှိပါက၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်။
Agustin ချားဗေ့စ် ဟုသူကပြောသည်
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏ပြနာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ အကြောင်းမှာလေထုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောအချက်များရှိနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှမလုပ်ခဲ့ပါ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးသမားများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဤပြproblemsနာများကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်ဆန္ဒရှိသူတိုင်းအရေးကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အသိအမြင်မြင့်မားလာစေရန်နှင့်ရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ ရောဂါများနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပြောင်းလဲခြင်းများမှရှောင်ရှားရန်လှုပ်ရှားမှုများကိုစတင်ကြပါစို့။
ငါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် COWSPIRACY ကိုဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖွင့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အရကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တိရိစ္ဆာန်များ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ထို့အပြင်အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရှင်းပါသည်။ အသားကိုစားခြင်းသည်အရင်းအမြစ်များစွာလိုအပ်သည်။ သင်စားသောက်ဆိုင်ရှိမည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုကြည့်ရှုပါကအသားတင်သွင်းမှုသည်စုစုပေါင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝသတိမပြုမိသည့်အရာဖြစ်ပြီးမည်သည့်အလှူငွေမှမပါ ၀ င်ပါကလူသားအများစုသည်အစာစားခြင်းကဲ့သို့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအပျော်အပါးတစ်ခုဖြစ်သည့်စားသုံးမှုအလေ့အထကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရဲ့အလွန်လေးနက်တဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပြင်ဘက်ကအကြောင်းအရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်၎င်းကိုများစွာမစဉ်းစားဘဲသဘာဝကျပါတယ်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံရေးအရအကြီးအကျယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပုံရသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲပြီးမသက်မသာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိစေလိုသော်လည်းသူကဖော်ထုတ်ပြသသည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏ပြtheနာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အပြောင်းအလဲလိုအပ်ချက်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်၊ အာခေါင်၌သာမကစိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ်ထားရှိသောစာနာမှုပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်က သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သက်သက်လွတ်ဝါဒကိုအချို့တို့သည်စစ်သွေးကြွများနှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာအားပေးအပ်ထားသောကမ္ဘာကြီးသို့လေးစားသောဘဝလမ်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်ခုခုပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ လေးစားပါတယ်
လူတို့သည်အလွန်ပူသောကြောင့်လေထုကိုဖျက်ဆီးနေပြီးသစ်တောများကိုပြသသည့်အခါ၎င်းကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်၊ သစ်ပင်များခုတ်လှဲခြင်း၊ မီးခိုးငွေ့များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအတွက်လူများသည်ပထမဆုံးအပြစ်တင်ကြသည်။
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်မှထွက်ခွာသည့်ဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမှာကထိုရုပ်ကြွင်းများအားမှန်ကန်သောလမ်းညွှန်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။
Jorge Ventura ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကသူတို့ဆုံးရှုံးသွားသည်ကိုမြင်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်အရာကိုမသိကြောင်းပြောခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက်ကျော်လွန်သွားပါကငွေကြေးနှင့်နည်းပညာအားလုံးထက်အစားထိုးမရနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်အားမိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွှတ်လျှင်၎င်းသည်နည်းပညာများစွာအသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂရုမစိုက်ပါက၊ ကိုယ်မကျေနပ်နိုင်သည့်ရောဂါများကိုကျွန်ုပ်တို့အစာစားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေပါကဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ကျန်းမာသောဂြိုဟ်ကိုစွန့်ခွာသွားမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့မသိသောဘ ၀ ၌မိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ပြုမူသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဥာဏ်ပညာရှိရမည် အမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြစ်များနှင့်ပင်လယ်များကိုညစ်ညမ်းအောင်မလုပ်ရ၊ ငွေရေးကြေးရေးရည်မှန်းချက်အတွက်လည်းလုပ်ရသော်လည်းလူတိုင်းကသူတို့ပြုမူပုံကိုသိရှိပြီးမှသာမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
jorge ventura သို့ပြန်သွားရန်
rl Atisal အားဖြင့် actisal ဟုသူကပြောသည်
ကမ္ဘာကြီးသည်သတိကြီးစွာ ထား၍ သတိမဲ့နေခြင်း၊ အချိန်ကိုလေ့လာခြင်း၌ဗဟုသုတကင်းမဲ့ခြင်း၊ ကောင်းကင်စနစ်၏ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကိုတားဆီးရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အထက်တွင်ကြည့်ရှုသင့်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါတုန့်ပြန်မှုများ၊ အောက်မှာပို။ ပို။ ပို။ ပို။ ကြည့်ရှုရန်
rl Atisal ထံမှ actisal မှတုံ့ပြန်ပါ
ဘယ်လို CO2 ပြိုကွဲသည်
ဒါဟာကျောက်မီးသွေးအပူသောအခါ CO2 ပြိုကွဲကြောင်းရှင်းပါတယ်။ ဤအချက်၏ရှင်းလင်းသောအညွှန်းကိန်းများသည်သဘာဝတွင်ဖြစ်ပျက်သောဖြစ်ရပ်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ နွေ ဦး ရာသီရောက်သောအခါမိုးရွာသွန်းသည်။ နွေရာသီရောက်သောအခါမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နွေ ဦး ရာသီမှာနေရောင်ခြည်တွေဟာအရမ်းပူလို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေဆဲပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူနွေရာသီတွင်ဤရောင်ခြည်များသည်လေထုထဲသို့တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိပြီးအပူများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ကိုအပူပေးပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လွှတ်သည်ကိုသက်သေပြသည်။ ထို့နောက်အောက်စီဂျင်သည်လေထဲတွင်ရှိသောပေါများသောဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး H2O ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ပြီးတော့မိုး။
Huaycoloro သည်Huarochiríပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းနာမည်ကို Kech-huas အမည်နှစ်ခုမှလာလျှင် - huay-ghóနှင့် loj-ro - ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huay-ghóသည်အလွန်သေးငယ်သောပါးလွှာသောမြွေတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး၊ ၃၀ စင်တီမီတာခန့်ရှိပြီးအထူသည် ၄ ​​မီလီမီတာအောက်သာရှိသည်။ ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုမြေပြင်ပေါ်တွင် undulating ဖြစ်ပါတယ်။ မြေကြီးအောက်မှာနေတယ်။ ၎င်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကအသက်ရှင်သေးသည်။ သူတို့တစ် ဦး စီသည်ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားပြီးသူတို့နေထိုင်ရာမြေအောက်အောက်သို့ရောက်သွားကြသည်။
Huayco သည်မြွေ၏အမည်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ရာ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်မြွေငယ်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနေရာများရှိရှေးခေတ်တွင်နေထိုင်သူများသည်သူတို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းနေရာတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ Huaycos သည်မြွေများကဲ့သို့ရွေ့လျားစွာရွေ့လျားသွားပြီးသူတို့ကကွဲပြားလျှင် ဆက်၍ ပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်။
ပြီးတော့ "ကြက်တူရွေး" လို့ပြောတာက loj-ro ဆိုတဲ့ဆင်းသက်လာတာပါ။ Kech-hua ကဟင်းချိုတစ်မျိုးနဲ့တူပေမယ့်အထူ၊ အရာများစွာပေါင်းစပ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အာလူး၊ ပဲ၊ အသားစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ။ Huayco သည်ရပ်တန့်နိုင်သောနေရာသို့ရောက်သောအခါအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအစားအစာနှင့်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုကိုစုဆောင်းသည်။ ထိုမှ စ၍ Huaycoloro ဟူသောအမည်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
juan jhair အားပြန်ပြောပါ
Gino Gallo ဟုသူကပြောသည်
နှစ်အနည်းငယ်အကြာကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံများအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်လူတို့ကိုသတိမပြုမိစေရန်ဘာမျှမလုပ်လျှင်နှစ်လအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သေသွားနိုင်သည်မှာမည်မျှဝမ်းနည်းစရာပါသနည်း။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီရန်ကြိုးပမ်းပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ဤအချိန်ကိုနောက်ကျ။ မတားဆီးကြပါနှင့်။ လူသားဖြစ်ခြင်း ကျေးဇူးပြု၍ help
Gino Gallo သို့ပြန်သွားပါ
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ လေထုအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်နယူမိုနီယမ်၏ပြန်လည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်စီမံကိန်း။
donais sebastian Herrera မက်ဒီနာ ဟုသူကပြောသည်
ကျနော်တို့ကသူတို့သားသမီးများ၏အနာဂတ်, မရောက်မီကျနော်တို့ကပျက်စီးစေလျှင်, ကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့အဘို့အခွင့်အလမ်းစွန့်ခွာမည်အရာကိုကမ္ဘာကြီးကိုအလွန်လှပသောဖြစ်ပါသည် တိရစ္ဆာန်တွေတောင်မှသူတို့ကိုဂရုစိုက်ကြတယ်
donais sebastian herrera medina သို့ပြန်သွားရန်
မTHဲ - YT ဟုသူကပြောသည်
လူစီယာ Paredes ဟုသူကပြောသည်
Lucía Paredes အားပြန်ပြောပါ
Moisés Ugido Cedeño ဟုသူကပြောသည်
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာမွေးမြူရေးများ၊ နွားများမှမီသိန်းဓာတ်ငွေ့များ၊ သူတို့၏ stiercol နှင့် flatulence တို့ကြောင့်လူသားအားလုံးမှထုတ်လုပ်သော CO2 အားလုံးနီးပါးကိုညစ်ညမ်းစေပြီး၎င်းသည်နေရာနှင့်အရင်းအမြစ်များများစွာလိုအပ်သောသစ်တောပြုန်းတီးမှုဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်သာထုတ်လုပ်ပါ ...
ကောင်းကောင်းရှင်းပြထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် cowsparacy ကိုကြည့်ဖို့လည်းအကြံပေးလိုပါတယ်
Moisés Ugido Cedeñoအားပြန်ပြောပါ
အဲလ်ဘတ်တို Compagnucci ဟုသူကပြောသည်
မှတ်ချက်ပေးတာထက်ပိုတဲ့၊ ကျွန်တော်စုံစမ်းချင်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုမှထွက်ပေါ်လာသည့်အကြောင်းရင်းများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သမိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းဆိုချက်များမရှိသောရာသီဥတုသံသရာထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလော။ ငါသည်နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀၀ ခန့်ကြာရှည်သောသံသရာရှိသည့်ကမ္ဘာ၏လှုပ်ရှားမှုကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သက်တမ်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်ရည်ညွှန်းချက်နှင့်မိုးလေ ၀ သနှင့်သက်ဆိုင်မှုနည်းသည်။ ငါကြားခဲ့ရတာတွေအပေါ်အခြေခံပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ဟာရေခဲခေတ်ထဲကိုနှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ လောက်ရှိပြီးတိုက်ဆိုင်မှုကတော့ပြသမှုရဲ့တစ်ဝက်တစ်ဝက်ကြာချိန်ကိုအကြမ်းဖျင်းကိုက်ညီပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုးကားချက်မရှိသောအချိန်သို့ ဦး တည်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သလော။ ထိုနည်းတူစွာပင်နေ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကမ္ဘာပတ်လမ်းသည်အမှန်ကိုဘဲဥပုံတစ်လုံးဖြစ်ကြောင်းသိပြီးတင်ဆက်မှုသည်ထိုဘဲဥပုံ၏ foci နှင့်အကွာအဝေးအကြားအကွာအဝေးကိုပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းကို၎င်းမှရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်, လေ့လာရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများအတွက်?
Alberto Compagnucci အားစာပြန်ပါ
diego saavedra gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုဟာဒဏ္thာရီတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီဟာကသုံးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သုတေသနပြုချက်တွေရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါမှန်တာမှန်ရင်ငါရှာနေတာကငါလား။
diego saavedra gonzalez အားပြန်ပြောပါ
စာရေးသူ (သို့) မျှဝေထားသောဗဟုသုတကိုအထောက်အကူပြုသောတက္ကသိုလ်အနည်းဆုံးတစ်ခုမပေါ်ပေါက်ပါကကျွန်ုပ်၏အလုပ် (သို့) စာတမ်း၌ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။ သုတေသနသို့မဟုတ်ကွင်းဆင်းလုပ်ခဲ့သူများ၏ကိုးကားချက်များ (သို့) ဆိုဒ်များရှိသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများတွင်ကျွန်ုပ်ကိုဒေါသထွက်သည်။ စုစုပေါင်း plagiarism ။
အဲလက်စ် Gonzales Herrera ဟုသူကပြောသည်
အဲဒါမမှန်ပါဘူး၊ ငါအဲဒါကိုစာရင်းပုံစံတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရမ်းများတယ်၊ အလွန်ဆိုးရွားသည့်အကြောင်းများအတွက်၊ ဒီ site ကိုဘယ်တော့မှမဝင်ရဘူး၊ အသုံးမကျဘူး
Alex Gonzales Herrera အားပြန်ကြားခြင်း
Camila Osa ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်သည်မှာမှတ်သားစရာမှာအကြီးမားဆုံးတရားခံများထဲမှကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများလောင်ကျွမ်းခြင်းထက် ကျော်လွန်၍၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့အများဆုံးဖြစ်ပွားသည့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာန်များမှထုတ်လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့များသည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များကိုဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုတိရိစ္ဆာန်များဆူအောင်ကျွေးသောအစားအစာများစိုက်ပျိုးရန်သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကများပြားစေသည်။
Camila Osa သို့ပြန်ပြောပါ